Mayelana NATHI - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
I-CFM - USUKU OLUFANAYO LOKUTHUNYELWA
Ibhizinisi elisungula izinto ezintsha kumamodeli asefektri lenza ukuphrinta okuqonde ngqo efektri kwenzeke.
Uku-oda okulula nokulula kwe-inthanethi konga isikhathi sakho nemali yakho ekuthengeni.
Kusukela ngo-2011, iCFM ibigxile ekukhangiseni izindwangu cishe iminyaka eyishumi.
I-CFM ingumhlinzeki wokuqala wezinsizakalo ezisebenza nge-Intanethi wokukhangisa ngezindwangu eChina, ohola phambili ekuthuthukiseni uhlelo loku-oda online, asungule umhlangano wokufundisana wedijithali futhi azuze "ukusebenza nabantu abambalwa kepha amandla aphezulu okukhiqiza".
Ngobuchwepheshe obusha, i-CFM iguqula indlela yendabuko yokufaka ama-oda, iqaphela ama-oda akwi-inthanethi aqhutshwa uhlelo ngokushesha, ngaphandle kokuxhumana okuphakathi noma ukuxhumana okungafuneki. Imodi yethu yoku-oda online ye-B2F (yebhizinisi kuya kuFektri) ikuvumela ukuthi ujabulele ukuthenga okulula, okulula nokusebenzayo.
I-CFM izibophezele ekunikezeni imikhiqizo yokubonisa esezingeni eliphakeme, isikhathi sokuhola esisheshayo kanye nensizakalo yamakhasimende engabekiwe. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka amatende ombhede, izembozo zethebula, amafulegi ophaphe, ukuboniswa kwendwangu, kanye nazo zonke izinhlobo zamafulegi nezifiso.
Ngeminyaka eyi-10 yokuhlangenwe nakho embonini yendwangu yokubonisa, i-CFM ikunikeza iziphakamiso zendwangu yobungcweti, ukukhetha izindlela zokuphrinta, nezixazululo zokubonisa imicimbi.
Kungani ukhetha i-CFM?
Uma usuku lomcimbi lufanele, ingabe ulwela ukuthola umnqamulajuqu ngenxa yesikhathi eside sokuhola semikhiqizo yakho yokubonisa?
Uma ukhiqiza ekhaya noma uthenga kumhlinzeki wendawo, ingabe uyazihlupha ngenani eliphezulu ngenxa yezindleko eziphezulu zabasebenzi?
Lapho uthenga kumuntu ophakathi nendawo noma inkampani yokuhweba, ingabe ukuthola kunzima ukuthola intengo yokuncintisana futhi uqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo nesikhathi sokuhola?
I-CFM ingakusiza ukuxazulula zonke izinkinga ngasikhathi sinye.
Isikhathi se-24HR Rush Lead Siyatholakala
Imikhiqizo Yekhwalithi, Amanani Okuncintisana
Direct-to-Factory Izikhungo Ukuphrinta
Isevisi Yamakhasimende Engagodliwe
Uhlelo lwethu lwama-24hr lokucaphuna noku-oda online likuvumela ukuba uthole izingcaphuno kanye nokubeka ama-oda noma kunini, asikho isidingo sokukhathazeka ngomehluko wesikhathi, ngokwesibonelo, kunomehluko wesikhathi samahora ayi-12-15 phakathi kweChina ne-US. Futhi insiza yethu yobuciko engu-24Hr kanye nensizakalo yokuphrinta engu-24Hr iziqinisekiso zesikhathi sethu sokuhola esisheshayo esingu-24Hr.
I-CFM inciphisa izindleko zayo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha, okusenza sikwazi ukukunikeza amanani ancintisanayo ngaphandle kokudela ikhwalithi yomkhiqizo. Ngokwethula uhlelo olwenziwe ngezifiso lokuphathwa kwedijithali, indawo yethu yokusebenzela ingasebenza kahle kakhulu, noma ngabe kunabantu abambalwa, sisengafinyelela amandla aphezulu okukhiqiza. Lapho uthenga ku-CFM, ungahlala uthola imikhiqizo yokubonisa esezingeni elifanele noma ngabe unesabelomali esilinganiselwe.
Njengoba uhlelo lwethu loku-oda luxhumeke ngaphandle komthungo nohlelo lwethu lokukhiqiza, lapho uthenga ku-inthanethi, kusho ukuthi ukhuluma ngqo ne-workshop yethu futhi azikho izixhumanisi eziphakathi. Okwamanje, ukuvunyelwa kobuciko online nokulandelela isimo se-inthanethi kungenzeka. Insizakalo yethu yokuphrinta eqonde ngqo efektri ayikwazi ukwenza umsebenzi wakho kahle kuphela kepha futhi ikusize ukuthi ugcine izindleko zokuxhumana.
Ngaphezu kwalokho, i-CFM inikezela ngochungechunge lwezinsizakalo ezengezwe ngamanani kumakhasimende, kusuka ezinqolobaneni zase-USA kuye ekusekelweni kokumaketha, nakwezaphulelo zezimpahla ze-VIP kuya kusixazululo sokuthenga iqembu sehadiwe. I-CFM ayihloseli nje ukukuphrinta kuphela imikhiqizo ekhangayo kodwa futhi izama ukudala amanani amaningi webhizinisi lakho.